15 Mibvunzo Yaunofanira Kubvunza Nezve API Yavo Usati Wasarudza Platform | Martech Zone
Shamwari yakanaka uye chipangamazano akanyora akabvunza mubvunzo kwandiri uye ndinoda kushandisa mhinduro dzangu pane ino posvo. Mibvunzo yake yaive yakatarisana zvakanyanya neindasitiri imwe (Email), saka ndakagadzira mhinduro dzangu kumaAPI ese. Akabvunza mibvunzo inofanirwa kubvunzwa nekambani mutengesi nezveAPI yavo vasati vaita sarudzo.
Nei Uchifanira APIs?
An application programming interface (API) ndiyo interface inopihwa necomputer system, raibhurari, kana chishandiso kuitira kubvumira zvikumbiro zvemashumiro kuti zviitwe nazvo nemamwe mapurogiramu ekombuta, uye / kana kubvumidza data kuchinjaniswa pakati pavo.
Sezvo iwe paunonyora mu URL uye unowana mhinduro kumashure pawebhu peji, API ndiyo nzira iyo masystem ako anogona kukumbira uye kuwana mhinduro kumashure kuti uwiriranise dhata pakati pavo. Sezvo makambani anotarisa kuzvishandura pachidimbu, kuita mabasa kuburikidza nemaAPI inzira huru yekuvandudza kugona mukati mesangano uye kudzikisira kukanganisa kwevanhu
MaAPIs ari pakati pekushandisa, kunyanya mukushambadzira kunyorera. Imwe yematambudziko kana uchitenga kune mukuru mutengesi ane yakazara API ndeyekuti budiriro zviwanikwa uye mari zvinowanzo kuve mushure mekufunga. Boka rekushambadzira kana CMO inogona kutyaira kutengwa kwechikumbiro uye dzimwe nguva timu yekusimudzira haina kuwana yakawanda yekuisa.
Kutsvagisa kugona kwekubatana kwepuratifomu kuburikidza neAPI kunoda zvinopfuura mubvunzo uri nyore, Pane API here?
Kana iwe ukasaina nechikumbiro neisina kutsigirwa kana yakanyorwa API, uchaendesa timu yako yekusimudzira kupenga uye kusangana kwako kungangoita kupfupi kana kukundikana zvachose. Tsvaga mutengesi chaiye, uye kusangana kwako kuchashanda uye vako vekusimudzira vanhu vanofara kubatsira!
Mibvunzo yekutsvagisa Pane yavo API Kugona:
Ratidza Gap - Ziva kuti ndeapi maficha eInternational Interface avo anowanikwa kuburikidza neApplication Programming Interface. Ndeapi maficha ayo API ane iyo iyo UI isina uye zvinopesana?
Scale - Bvunza kuti mangani mafoni anoitwa kwavari API zuva nezuva. Vane dziva rakazvitsaurira remaseva? Huwandu hwakakosha zvakanyanya sezvo iwe uchida kuona kana iyo API iri yekufungidzira kana ichokwadi chikamu chekambani zano.
Documentation - Kumbira iyo API zvinyorwa. Inofanirwa kuve yakasimba, ichiperetera chese chinhu uye musiyano unowanikwa muAPI.
Community - Bvunza kana ivo kana vasina online Nharaunda Yenharaunda inowanikwa yekugovana kodhi uye mazano nevamwe vanogadzira. Nzvimbo Dzekuvandudza ndidzo kiyi yekutanga yako yekuvandudza uye yekubatanidza kuedza nekukurumidza uye nemazvo. Panzvimbo pekumisikidza 'iyo API mukomana' kukambani, urikushandisa vese vatengi vavo avo vatove nemiedzo nezvikanganiso zvinosanganisa mhinduro yavo.
Zororo vs SIPO - Bvunza kuti ndeupi rudzi rwe API vane… Kazhinji pane maREST APIs uye Web Service (SOAP) APIs. Ivo vanogona kunge vari kuvandudza vese vari vaviri. Kubatanidzwa pamwe chete kune mabhenefiti nekutuka… iwe unofanirwa kuziva nezvako kugona kwako zviwanikwa '(IT) kugona.
Languages - Bvunza kuti ndeapi mapuratifomu uye maficha avakabatanidza pamwe nekukumbira vanofambidzana kuitira kuti iwe ugone kuziva kubva kune avo vatengi kuti zvaive zvakaoma sei kusanganisa uye kuti API inomhanya sei.
Nokuremara - Bvunza izvo zvisingakwaniswi nemutengesi muhuwandu hwekufona paawa, pazuva, pavhiki, nezvimwe. Kana usiri nemutengesi anotyisa, kukura kwako kunogumira nemutengi.
mimwe - Ivo vanopa raibhurari yemakodhi mienzaniso kuti itange nyore? Makambani mazhinji anodhinda SDK (Software Development Kits) yemitauro yakasiyana siyana uye masisitimu ayo anokurumidzira yako yekubatanidza nguva.
Sandbox - Ivo vanopa isiri-yekugadzira endpoint kana sandbox nharaunda kuti iwe uedze kodhi yako mukati?
Zviwanikwa - Bvunza kana ivo vakazvitsaurira kusanganisa zviwanikwa mukati mekambani yavo. Vane boka remukati rekubvunza rinowanikwa rekubatanidza? Kana zvirizvo, kanda mamwe maawa muchibvumirano!
chibatiso - Vanogonesa sei kushandisa iyo API? Icho chiratidzo chevashandisi, makiyi, kana dzimwe nzira? Vanogona kudzora zvikumbiro ne IP kero?
Uptime - Bvunza kuti chii chavo API nguva yekukwira uye yekukanganisa mwero iri, uye kana yavo yekuchengetedza maawa ari Zvakare, marongero ekushanda akavakomberedza akakosha. Vane maitiro emukati anozoedza zvekare API kufona muchiitiko icho rekodhi isingawanikwe nekuda kweimwe nzira? Ichi chinhu chavakagadzira mumhinduro yavo?
SLA - Vane Service Level Agreement kupi nguva dzekuwedzera dzinofanirwa kuve kumusoro kwe99.9%?
Roadmap - Ndeapi ramangwana maficha avari kusanganisa muAPI yavo uye ndeapi matanho anotarisirwa ekutakura?
Kubatanidzwa - Ndeapi mabudiro akagadzirwa avakagadzira kana kuti echitatu-mapato akagadzira? Dzimwe nguva, makambani anokwanisa kuregedza kuvandudzwa kwemukati pane maficha kana kumwe kubatanidzwa kwakagadzirwa kwatoripo uye kuri kutsigirwa.
Chinokosha kumibvunzo iyi ndechekuti kusangana 'kunoroora' iwe kuchikuva. Iwe haudi kuroora mumwe munhu usati wasvika pakuziva zvakawanda sezvaunogona nezvavo, handiti? Izvi ndizvo chaizvo zvinoitika kana vanhu vatenga chikuva vasina ruzivo rwekugona kwavo kusangana.
Beyond API, iwe unofanirwa zvakare kuedza kutsvaga kuti ndezvipi zvimwe zvekubatanidza zviwanikwa zvavangave nazvo: Barcoding, mepu, data yekuchenesa masevhisi, RSS, Webhu Mafomu, Widgets, epamutemo Partner Kubatanidzwa, Scripting Engines, madonhwe eSFTP, nezvimwe.
Tags: APIapi zvinyorwaapi kuongororaapi mafichaapi mibvunzoapi tsvagiridzokunyorera programming interfacezvinhuzororosandboxsdkchibvumirano cheyero yebasa
Mar 29, 2021 pa 11: 44 AM
Zvakanakisa zvemukati sekugara Doug!
Mar 29, 2021 pa 11: 47 AM
Ndatenda zvikuru, Jon! Gara uchikoshesa mumwe munhu anotora nguva yekusiya chinyorwa chemutsa
Aug 5, 2021 pa 3: 37 AM